10 ကြီးမြတ်ဘတ်စကတ်ဘောတရားရုံးများနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်နေရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 ကြီးမြတ်ဘတ်စကတ်ဘောတရားရုံးများနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်နေရာများ
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားတရုတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
အံ့သြဖွယ်မြင်ကွင်းများ, ရောင်စုံနှင့်ပျော်စရာ, မင်းအိပ်မက်မက်တဲ့မြို့တိုင်းမှာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဘတ်စကတ်ဘောကွင်းတွေရှိတယ်. သင်ဟာစိတ်ထက်သန်တဲ့ဘတ်စကတ်ဘောကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, လိုလားသူ, ဒါမှမဟုတ်ကွင်းအချို့ကိုသာရိုက်ချင်သည်, ဒါတွေကတော့ 10 ကောင်းမွန်သောဘတ်စကတ်ဘောကွင်းများနှင့်အကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်နေရာများ.
1. မြူးနစ်ဂျာမနီ 3D ဘတ်စကတ်ဘောကွင်း
တစ် ဦး ၏အိမ်ဖြစ်သည် ဥရောပရဲ့အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးဘောလုံးကွင်းများ, မြူးနစ်သည်ပျော်စရာကောင်းပြီးတက်ကြွသောအားလပ်ရက်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. သင်ကြောက်စရာကောင်းသောဘတ်စကတ်ဘောကွင်း၌ကြိုးကွင်းအချို့လေ့ကျင့်လိုလျှင်, then Munich’s 3D basketball court is where you should practice. This German basketball court သင်၏ကစားပွဲကိုအတုံးသစ်အဆင့်သို့ခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်, ပြီးတော့မင်းဒီမှာသတ်ဖို့စီမံနိုင်ရင်, မင်းဘယ်နေရာမှာမဆိုအောင်မြင်လိမ့်မယ်.
တစ်နည်းပြောရရင်တော့, 3D ဘတ်စကတ်ဘောကစားကွင်းသည်သင်၏ကစားပွဲကိုတက်စေရန်သင့်ကိုလှုံ့ဆော်လိမ့်မည်. သင်ဒီအရူးတရားရုံးတစ်ဝိုက်ရှိအဖုများပေါ်တွင်တည်ငြိမ်နေရန်လိုအပ်လိမ့်မည်. ဒါ့အပြင်ဘတ်စကတ်ဘောသည်မည်သည့်ဂိမ်းအတွက်မဆိုအခြေအနေကောင်းသည်, သင်၏အားလပ်ရက်တွင်တက်ကြွစွာနေလိုလျှင်, ပြီးတော့မင်းရဲ့အဖွဲ့ကိုခေါ်သွားတာပေါ့.
2. Pigalle ဘတ်စကက်ဘောကွင်းပဲရစ်
ခရီးသွားအများစုသည်စျေးဝယ်ခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောဘ ၀ ကိုနေထိုင်ရန် Paris သို့ခရီးသွားကြသည်, အပန်းဖြေသို့မဟုတ်အချစ်ရေးအားလပ်ရက်များအတွက်. ပါရီသည်စိတ်ကူးယဉ်ပြီးနှစ်သက်ဖွယ်အားလပ်ရက်အတွက်နာမည်ကြီးနေရာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း, ၎င်းသည်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အလွန်ကောင်းသောနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်. ပဲရစ်တွင်လမ်းလျှောက်ရန်ပန်းခြံများနှင့် River Seine များစွာရှိသည်, သို့မဟုတ်စက်ဘီးစီးခြင်း, အရောင်စုံဆုံးဘတ်စကတ်ဘောကွင်းအပြင်.
Pigalle ဘတ်စကတ်ဘောကွင်းသည် Nike ၏ဖန်တီးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်, မကောင်းသောစတူဒီယို, ပြင်သစ်ဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ် Pigalle. သူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းမှုကဒီအရူးကိုဖန်တီးခဲ့တယ်, ကြားတွင်တည်ရှိသည်2ဘတ်စကတ်ဘောတိုက်ခန်းအဆောက်အအုံ. Pigalle ၏ gradient အရောင်များသည်အလွန်ရယ်စရာကောင်းသည်, Parisian ရပ်ကွက်တစ်ခုအလယ်၌. ဤဘတ်စကက်ဘောသည်လုံး ၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပြီးကွင်းအချို့ကိုပစ်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သည် 17 Rue Duperre ဖြစ်သည်.
3. Rooftop City Hall Court Dubrovnik ခရိုအေးရှား
Dubrovnik သည်အံ့သြဖွယ်အားလပ်ရက်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်, Adriatic ပင်လယ်ရှုခင်းများဖြင့်ဝန်းရံထားသည်. နေရာတိုင်းတွင် Terra-cotta အိမ်ခေါင်မိုးများရှိသည်, စိမ်းပြာရောင်ပင်လယ်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်မျက်နှာစာများ, နှစ်စဉ်ခရီးသွားရာပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်သည်. Dubrovnik မြို့ကိုကျောက်မြို့ရိုးများဖြင့်ဝန်းရံထားသည်, ရာစုနှစ်များစွာတွင်ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားသည်, ဒါကြောင့်လည်းကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောဘတ်စကတ်ဘောကွင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်.
ဤဘတ်စကတ်ဘောကွင်းသည်မြို့တော်ခန်းမခေါင်မိုးပေါ်၌ရှိသည်, Adriatic ပင်လယ်၏အံ့သြဖွယ်ရှုခင်းများနှင့်အတူ. ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော Old Town ရှုခင်းများနှင့်အပြာရောင်အဆုံးမဲ့မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းနှင့်အတူ hoops များကိုရိုက်ကူးကြည့်ပါ. ခေါင်မိုးရှိမြို့တော်ခန်းမဘတ်စကတ်ဘောကွင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကြီးမြတ်ဆုံးဘတ်စကက်ဘောများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်.
4. Mamba ဘတ်စကက်ဘောကွင်းအိမ်သည်တရုတ်နိုင်ငံရှန်ဟိုင်းမြို့
ရှန်ဟိုင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ခေတ်အမီဆုံးနှင့်ရယ်စရာအကောင်းဆုံးမြို့များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မိုးမျှော်တိုက်များ, နှင့်အသက်ထက်အထင်ကရနေရာများ, Mamba ဘတ်စကတ်ဘောကစားကွင်းသည်အိမ်ဖြစ်သည်, Nike မှ. ဤမော်ကွန်းဘတ်စကတ်ဘောကွင်းသည်ပျော်စရာကောင်းပြီးဆန်းသစ်သည်, ကမ္ဘာပေါ်ရှိအားလပ်ရက်အကောင်းဆုံးနေရာများထဲမှတစ်ခုအတွက်အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်.
ရှန်ဟိုင်းအိမ်၏ Mamba ဘတ်စကတ်ဘောကွင်းသည်သင်၏အကောင်းဆုံးကစားနည်းအတွက်အပြည့်အ ၀ တပ်ဆင်ထားသောအရွယ်အစားပြည့်ဘတ်စကတ်ဘောကွင်းဖြစ်သည်. တရားရုံးသည်တရုတ်ပြည် Nike Rise tour အတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်, reactive LED visualization ကြောင့်သင်အံ့သြလိမ့်မည်. ဒါကြောင့်, hoop သို့သင်သွားသောခြေလှမ်းတိုင်းသည်ကြမ်းပြင်ကိုလင်းစေသည်, လူအုပ်သည်တအံ့တသြအော်ဟစ်ကြသည်.
5. အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Brighton Beach တရားရုံး
သဲရွှေသောင်ယံ, ကြီးမားသောလမ်းလျှောက်ပွဲ, နှင့်လတ်ဆတ်သောပင်လယ်လေ, Brighton သည်အားလပ်ရက်အပန်းဖြေနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. အင်္ဂလန်သည်မီးခိုးရောင်ကောင်းကင်အတွက်နာမည်ကြီးသည်, Brighton သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပင်လယ်ကမ်းခြေအားလပ်ရက်ခရီးဖြစ်သည်. Brighton ၏ပင်လယ်ကမ်းခြေနေရာသည်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အထူးသင့်တော်သည်.
နေရောင်ခြည်အောက်တွင်ကြိုးကွင်းများပစ်ခြင်းနှင့်တရားရုံးမှပင်လယ်သို့တည့်တည့်ခုန်ခြင်းတို့သည်ကြောက်စရာကောင်းသောအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်. Brighton ၏ကမ်းခြေဘတ်စကတ်ဘောကွင်းသည်မည်သည့်ကစားသမားသို့မဟုတ်ဂိမ်းအတွက်မဆိုကောင်းမွန်သောအခြေအနေများရှိသည်. ဒါကြောင့်, သင်ကြီးမြတ်ခြင်းကိုရှာနေလျှင် တက်ကြွအားလပ်ရက်, ဘတ်စကက်ဘော, ရေကူး, ကမ်းခြေပေါ်တွင်အပန်းဖြေခြင်းသည်အပန်းဖြေပြီးထိုစွမ်းအင်အဆင့်များကိုတစ်ဖန်ပြန်လည်မြင့်တက်ရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်.
6. လန်ဒန်ရှိ Nike ဘတ်စကက်ဘောကွင်း Thames River
မင်းဖြုန်းတာပဲ 8 လန်ဒန်မှာရက်ပေါင်း, ပြီးတော့ဒီစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့မြို့ကကမ်းလှမ်းတဲ့အရာအားလုံးကိုမရှာဖွေနိုင်သေးဘူး. စျေးဝယ်ခြင်းမှသည်အနုပညာနှင့်ဂီတသို့, လန်ဒန်သည်အားလပ်ရက်အပန်းဖြေနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားများအတွက် နှင့်မိသားစုများ. ထိုကွောငျ့, လန်ဒန်သည်မြို့တော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုသင်အံ့သြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများ, ကြောက်စရာကောင်းသောပန်းခြံများနှင့် Thames မြစ်တို့ဖြင့်.
Regal & Thames မြစ်ပေါ်တွင်ဂျော်ဒန်ဘတ်စကတ်ဘောကွင်းသည်ကြောက်စရာကောင်းသောပြင်ပဘတ်စကတ်ဘောကွင်းဖြစ်သည်. ကစားသမားများသည်ဂိမ်းများအကြားမြစ်မှလေကောင်းလေသန့်ကိုခံစားပြီးသာယာလှပသောမြစ်နှင့်မြို့မြင်ကွင်းများကိုစုပ်ယူနိုင်သည်. ထို့အပြင်, တရားရုံး၏ဒီဇိုင်းသည်ချောမွေ့ပြီးဒဏ်ရာမရှိသောဂိမ်းအတွက်သယ်ဆောင်နိုင်သောချိန်ညှိနိုင်သောကြိုးများနှင့်ပုံစံတူ Nike ကြမ်းပြင်များပါ ၀ င်သည်။.
7. Aalst ရှိဘယ်လ်ဂျီယံဘတ်စကတ်ဘောကွင်း
ဆောင်း ဦး ၌အလွန်လှသည်, ဒီဇင်ဘာ၌အလွန်စည်ကားသည်, နှစ်စဉ် Aalst ပွဲတော်အတွက်ရာနှင့်ချီသောခရီးသွားများရောက်လာသောအခါ, Aalst တစ်နှစ်ပတ်လုံးလည်ပတ်ရန်နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်ရှိသည်. ဤနေရာတွင်အထူးခြားဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Aalst ၏ရောင်စုံဘတ်စကတ်ဘောကွင်း, အနုပညာရှင် Katrien Vanderlinden ၏လက်ရာ. အရောင်မျိုးစုံပုံစံမျိုးစုံဖြင့်, Vanderlinden သည်သူမ၏အနုပညာကိုကလေးကစားပွဲတစ်ခုပေါ်တွင်အခြေခံသည်, Logical Blocks များ.
ဒါကြောင့်, Aalst သည်အမြဲတမ်းအားလပ်ရက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်, အားလပ်ရက်အားလပ်ရက်မှာကြံ့ခိုင်ရေးလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့ဒီဘတ်စကတ်ဘောကွင်းအသစ်ကအကောင်းဆုံးပါ. မသာကြောင်း, ဒါပေမယ့်ဒီဇိုင်းကတကယ့်ကိုရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဖြစ်ပြီးဥရောပရဲ့အထူးခြားဆုံးဘတ်စကတ်ဘောကွင်းတွေထဲကတစ်ခုကိုလေးစားဖို့ဘရပ်ဆဲလ်ကနေတစ်နာရီခရီးနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်။.
8. Nosara ကော်စတာရီကာ
Panoramic Pacific မြင်ကွင်းများနှင့်အတူ, စိမ်းလန်းစိုပြေသောတောင်တန်းများ, နှင့်အပူပိုင်းရာသီဥတု, ကော်စတာရီကာသည်မည်သည့်ခရီးသွားအတွက်မဆိုပရဒိသုဖြစ်သည်. ထိုင်ပြီးမိုးကုတ်စက်ဝိုင်းကိုကြည့်ရုံပဲ, ဒါမှမဟုတ်ကမ်းခြေမှာလမ်းလျှောက်တာကမင်းကိုအပန်းဖြေတဲ့ပုံစံနဲ့တည့်တည့်ထားလိမ့်မယ်.
ကော်စတာရီကာသည်လူတိုင်း၏အိပ်မက်အားလပ်ရက်ခရီးဖြစ်သည်, အပန်းဖြေရန်သို့မဟုတ်လှိုင်းစီးရန်နှင့်ပြင်ပပျော်စရာများအတွက်. ထိုကွောငျ့, ၎င်းသည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအားလပ်ရက်အပန်းဖြေအိမ်ရာများထဲမှကြီးကျယ်သောဘတ်စကတ်ဘောကွင်းတစ်ခုနှင့်ပါလာသည်. Finca Austria ကျွန်ုပ်တို့၏ villa ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့်ရေကူးကန်ကိုအပေါ်စီးမှအံ့သြဖွယ်ဘတ်စကတ်ဘောကွင်းရှိသည်. ဇိမ်ခံအားလပ်ရက်မှာတစ်ယောက်အတွက်ဘာပိုလိုလဲ?
တက်ကြွတယ်, အသစ်တီထွင်ပြုလုပ်သော, စိတ်လှုပ်ရှားစရာ, နှင့်ပျော်စရာ, ဟောင်ကောင်၏ဘတ်စကတ်ဘောကစားကွင်းသည်၎င်း၏အိမ်ကဲ့သို့အထင်ကရဖြစ်သည်. ဟောင်ကောင်သည်တစ်ခုဖြစ်သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင်လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာများ ၎င်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသဘာဝကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်. လှပသောရှုခင်းများမှကျွန်းပတ်လည်သို့ကမ်းခြေများနှင့်ခရီးများ, ဟောင်ကောင်သည်လူတိုင်းကိုထပ်ခါထပ်ခါပြန်လာစေသည်. ဟောင်ကောင်ဘတ်စကတ်ဘောကွင်းသည်ကြီးမားသည်, အသစ်က, ရောင်စုံ,aတွင်တည်ရှိသည် ရပ်ကွက်ကြီး.
Choi Hung Estates ဘတ်စကတ်ဘောသည်ဟောင်ကောင်တွင်အကောင်းဆုံးဘတ်စကက်ဘောများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. ထို့အပြင်, ၎င်းသည်အရောင်စုံဆုံးနေရာများထဲမှတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်, ဓာတ်ပုံကောင်းများအတွက်အလွန်သင့်တော်သည်. မင်းဟောင်ကောင်ကိုမသွားဖူးရင်, ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောခရီးသို့သေချာစွာဘွတ်ကင်လုပ်ပါ, ၎င်းသည်တစ်ခုဖြစ်သည် 10 ကောင်းမွန်သောဘတ်စကတ်ဘောကွင်းများနှင့်အကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်နေရာများ.
10. ဘာလင် Tempelhof ဘတ်စကတ်ဘောကွင်း
Tempelhof feld ပန်းခြံ၏အနှစ်သာရသည်အပြင်ဘက်၌ပျော်စရာဖြစ်သည်. ဘတ်စကက်ဘောစက်ဘီးစီးခြင်းမှ, ဒါမှမဟုတ်စိတ်အေးအေးထားပါ, Tempelhof သည်ဘာလင်ရှိလျင်မြန်သောဘဝ၌ပြီးပြည့်စုံသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ဘာလင်သည်အလွန်ကောင်းသော Nightlife ရှိပြီး၎င်း၏လာရောက်လည်ပတ်သူများအားလုံးကိုအလွန်ဖော်ရွေသည်, ထို့ကြောင့်လူတိုင်းကိုလက်ခံရန်မြို့၏အစီအစဉ်သည်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ.
ဘာလင်၏ Tempelhof ဘတ်စကတ်ဘောသည်ဥရောပရှိဘတ်စကတ်ဘောကွင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. ဝင်ပေါက်တွင်တည်ရှိသည်, ပျော်ပွဲစားဧရိယာတွင်, စိမ်းလန်းသောသစ်ပင်များနှင့်မြက်များဖြင့်ဝန်းရံထားသည်, ဤဘတ်စကတ်ဘောကွင်းသည်သင်၏အသက်ရှုသံနှင့်လေ ၀ င်လေထွက်တိုင်းကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းခံစားရစေသည်.
ငါတို့မှာ တစ်ဦးကရထား Save သင်ဤခရီးများစီစဉ်ရန်ကူညီခြင်းအတွက် ၀ မ်းမြောက်လိမ့်မည် 10 ကောင်းမွန်သောဘတ်စကတ်ဘောကွင်းများနှင့်အကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်နေရာများ.
Do you want to embed our blog post “10 Best Holiday Locations With Great Basketball Courts” onto your site? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmy%2Fholiday-locations-basketball-courts%2F- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
ဘတ်စကက်ဘော BasketballCourt BasketballCourts bestbasketballcourtseurope playbasketballeurope